Minister Turhan vanoisa iyo yekupedzisira po paTÜVASAŞ 'havazove nyanzvi "| RayHaber | raillynews
mushaTURKEYDunhu reMarmara54 SakaryaMinister Turhan vanoisa iyo yekupedzisira po paTÜVASAŞ 'havazove nyanzvi "
Minister Turhan vanoisa iyo yekupedzisira po paTÜVASAŞ 'havazove nyanzvi "
20 / 03 / 2020 54 Sakarya, Railway, GENERAL, masangano, musoro wenyaya, Dunhu reMarmara, Tüvasas, TURKEY
minister turhan akaisa yekupedzisira pfungwa pane canvas
State Railways of Zimbabwe Turkey nokuda kambani akabatanidza mamwe maviri TÜRASAŞ mukati wokupedzisira TÜVASAŞ Gurukota Turhan okupedzisira nguva pamusoro mhosva chakaita zvachose dzateyiwa. Vakashanya neMutungamiri weTurkey Transport-Sen M. Nurullah Albayak, Gurukota Cahit Turhan vakati, "TÜVASAŞ haisi kuzovanzika, asi ichawedzera zvakanyanya."
subsidiaries State Railways Enterprise kuti Turkey Wagon Industry (TÜVASAŞ), Turkey locomotive Engine Industry (TÜLOMSAŞ) uye Turkey Railway Machines Industry (TÜDEMSAŞ) nokupisa kubatana Turkey Rail System Utilities Industry Corporation (TÜRASAŞ) yakatangwa.
Mushure mekusanganisa uku, kuwanda kwemashoko akaitwa akadai sekuti "Achazotengeswa kune mumwe munhu munguva pfupi iri kutevera" uye "TÜRASAŞ ichavanzika".
pamusoro yokufungidzira achangobva akaita Turkey Kamu-Sen President Önder Kahveci uye Turkish Transportation-Sen Sachigaro m.nurullah Albayrak, Transportation uye Infrastructure Minister vakatsinhanisa maonero Visiting M. Cahit Turhan.
Pamusangano wakaitirwa kukurukurwa neTÜVASAŞ uye National Train Project, Minister Turhan vakati: "Hatina hurongwa hwekuvandudza kweTÜVASAŞ, tiri kushanda mukusimbaradza." akati.
Turkish Transport-Sen Mutungamiri M. Nurullah Albayrak, mune chirevo mushure memusangano; “Sezvo Türk İletişim-Sen, tange tichirwira kubatanidzwa kweaya masangano matatu akasarudzika kweanenge makore maviri. Isu takanyatso taura maitiro edu pane iyi nyaya nekugadzirira mapepa uye mapepa. Isu tainetseka kuti aya masangano anga achishanda zvakabudirira kwemakore, uye kuti kubviswa kwemahofisi makuru kunokonzeresa kuti masangano aya apere simba, atadze kushanda, uye nekudzikira kwebhizinesi ravo.
Takafunga kuti kuunganidzwa kwemasangano aya, ayo akakosha kwazvo kumatunhu avanoshanda, pasi padenga rimwe chete, achadzikira mari dzinozogadzirwa mumatunhu aya, zvinokanganisa hupfumi, kunyanya vashandi vanowana mari yavo yekurarama, uye nekudaro, vagari vese vanogara mumatunhu aya, uye vanokonzeresa kushayikwa kwemabasa.
Pamusoro peizvi zvese, tauya nenyaya yacho muhurongwa muTBMM, mukutaurirana naSivas Mutevedzeri Mr. Ahmet Özyürek. Mutevedzeri akaitawo musangano wekuburitsa nhau nezvekubatanidzwa kwemasangano ari pasi peamburera yeTurkey Grand National Assembly katatu nguva padenga reParamende. It mutambo kushanyira Turkey Kamu-Sen President Önder Kahveci Mr. Bey akauya Sakarya TÜVASAŞ uye Edit tsananguro mamiriro nhau nenzira womufekitari kuramba nenzira iyi.
Maitiro anotevera acharamba achingotariswa nekutarisirwa mubatanidzwa wedu, uye masisitimu edu achavandudzwa uye kunetseka kuwedzera bhizinesi ravo nemabasa.
Vezvematongerwo enyika vanogona kuita dzimwe sarudzo. Hapana mubvunzo kuti isu, seTurkey Yekufambisa-Sen, tichatevera kodzero dzevashandi nekutaura nyika uye nyika kutanga!
Tichaisa muviri wedu pasi pebwe kana zvichidikanwa kuitira kuti vashandi vanoshanda mumasangano aya vasabatwe!
Munguva inotevera, ndinokumbira mapato asiri ehurumende muSakarya kuti vauye kuzobvunza TÜVASAŞ !. Mumamiriro ezvinhu aya, takataura negurukota uye tichinjana maonero. Iye akativimbisa kuti TÜVASAŞ neTÜRASAŞ hazvizove zvakavanzika. Pane kudaro, akati zvichaenderera mberi. ”(Hakan Turhan /Medyab ndiye)
Mutungamiri Anotora Pfungwa Yekupedzisira MuKutevedzana Kwemotokari Dzimba
İZBAN inogumisa kuputika kwechirevo
Mutungamiri anoisa pfungwa yekupedzisira muSivas YHT
CHP's Sındır Puts Point muIZBAN Mhirizhonga
Gulf Bridge inonyanya kukoshesa mutambo wezvitima
Mashoko Akakosha kubva kumutungamiri Turhan Nezvekufambisa Mirairo
Iproject of the Century yakauya kuna Marmaray
Prime Minister Erdogan achaisa pfungwa yekupedzisira paTrabzon logistics centre
Mutungamiri Arslan, Ankara-Izmir YHT nhaurirano yenzira yakapera
Mutungamiri Turhan akaita chiziviso chokupedzisira paAtatürk Airport
Atatürk Airport kuzivisa muparidzi wekupedzisira wehurwende Turhan Yapacak
Mutungamiri Turhan akashanyira TÜVASAŞ
Çamlıca-Batıkent migwagwa yemitambo yakagadzirirwa pamativi ekufara kwevanhu vomunharaunda
Wokupedzisira Minute: Murume weGürses, Reverend Nur Akarasikirwa Nehupenyu Hwake
Istanbul Airport yokupaka Roti Yemahara pasi peCoronavirus Measure